XOG XASAASI + DHAGEYSO: Xildhibaan kashifay qorshe sir ahaa oo BF Somaliya uu labo sano ugu darsanayo waqtigiisa! | HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxda ugu sarreeyo dalka ayaa lagu eedeeyey inay wadaan qorsho culus oo ay waqti kororsi ku sameenayaan.
Maxamed Xasan Idiris oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaajka Soomaaliya ayaa sheegay inuu jiro guuxa ku aadan inuu Baarlamaanka Soomaaliya qorsheenayo in la sameeyo waqti 2 illaa 3 sano ah.
Sidoo kale, wuxuu sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi isna loo kordhin doono waqtiga weliba iyadoo aan la shaacin.
Xildhibaanka ayaa tilmaamay in qorshahaan uu wado Guddiga kumeel gaarka ah ee diyaarinta Sharciga doorashoyiinka ayna diyaariyeen dhowr Ajande oo ay marmarsiiyo ka dhiganayaan si loo sameeyo waqti kororsi 2-3 sano ah.
Xildhibaanka ayaa sheegay in sababta loo cuskan doono muddo kordhinta ay tahay in duruufo amni ay jirto taas oo aan suuragal ka dhigi karin doorashadii la filayay inay dalka ka dhacdo,taasina ay noqoneyso meel ka dhac loo geystay Shacabka Soomaaliyeed,isla markaana aysan fulin sababihii loo doortay.
DAWO MUUQAAL: Maxaa kala qabsaday Boqor Buur-Madow iyo Jiif Caaqil Rashiid Jaambiir oo meel fagaaro ah isku helay?!
Madaxda ugu sareysa Dowladda federaalka Soomaaliya ayuu sheegay inay wadaan qorshahaas mudo kororsiga ah,waxaana uu ka digay in dalka Soomaaliya uu xilligaan ka dhaco dagaalo Sokeeye.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa goor hore sheegay inuusan waqti ku darsan doonin isla markaasna uu doorashada qaban doono waqtigeeda.
Ilaa iyo hadda lama ogo sida ay ku suurtageli karto inay Dowladda Soomaaliya waqti kordhin sameysato maadaama taas horey looga diiday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud.
waqti ku kordhisanaya
Xildhibaan ka shifay